Noho ny fihanaky ny Covid-19 izao…
Saika mitombo isa hatrany ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Toy izany koa ny isan’ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny mamoy ny ainy. Manoloana izany, noferan’ny FFKM ho 200 ny isan’ny mpivavaka amina fanompoam-pivavahana iray ao anatin’izao fankalazana ny Paska izao, araka ny fihaonan’ireo filoham-piangonana tamin’ny filohan’ny Repoblika.
Tsy nisy ny fahatsiarovana ny faha-74 taon’ny 29 marsa, saika nomarihina amin’ny fametrahana fehezam-boninkazo ihany eny Avaratr’Ambohitsaina sy any Moramanga ary any Manakara noho ny fihanaky ny Covid-19. Teo koa fisaonam-pirenena noho ny fodiamandrin’ny filoha teo aloha, Ratsiraka Didier, nalevina eny Fasan’ny Maherifo, Avaratr’Ambohitsaina, io andro io.
Nanao antso avo ho an’ny vahoaka malagasy ny praiminisitra ny handraisan’ny tsirairay andraikitra amin’ny fanajana ireo fepetra sakana tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid -19 andiany faharoa: fanaovana arotava… Mba tsy hiverenana amin’ny fihibohana izay, hiainan’ny olona malalaka kokoa. Tsy fotoana fanaovana politika izao ka tokony hitandrina ireo mamoaka vaovao tsy marina na tsaho.
Mbola noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany: noferana hatramin’ny 18 avrily ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra miankina na tsia. Misy koa ny fepetra arahina aorian’izay: raha misy tranga telo, ohatra, ny kilasy iray, mikatona 14 andro ny kilasy; raha misy tranga amina kilasy telo, mikatona ny sekoly…
Noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izany rehetra izany, mampanahy be ihany ny maro ny mety hiverenana amin’ny fihibohana tanteraka. Misy aza ny maniry izany; eny, na eo aza ny fahasahiranana. Hanao ahoana?